Jadwalka Waxyaabaha Sheegaayo Xidhmada R Ruxda badan ee Rugta Wareegga
RCrawler waa software awood leh oo maamula labadaba shabakadda webka
) isla markaana isku wakhti isku mid ah. RCrawler waa xirmo R ah oo ka kooban qaabab gudaha ah sida ogaanshaha waxyaabo la duubay iyo saaridda xogta. Qalabkan shabakada ah ayaa sidoo kale bixiya adeegyo kale sida shaandhaynta xogta iyo macdanta webka.
Xogta si wanaagsan loo qaabeeyey oo la diiwaangeliyey way adag tahay in la helo. Qadar badan oo xog ah oo laga heli karo internetka iyo bogagga internetka ayaa inta badan lagu soo bandhigaa qaabab aan la aqbali karin. Tani waa halka barnaamijka RCrawler uu ku yimaado. Xidhmada RCrawler waxaa loogu talagalay in ay natiijooyin waara oo dabiiciga ah u keenaan. Software-kani wuxuu ku shaqeeyaa labadaba shabakad webka iyo isku-marinta isku mar.
Maxay webku u burburay?
Bilawga, macdanta webka waa nidaam ujeedadiisu tahay inuu ururiyo macluumaadka laga heli karo internetka. Macdanta webka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood kuwaas oo ay ka mid yihiin:
Maadada shabakadda internetka
Macdanta internetka waxaa ka mid ah soo saaridda aqoonta waxtarka leh goobta xoqida . Dhismaha web-ka-samaynta
Dhismaha qaab-dhismeedka webka, qaababka u dhexeeya bogaga ayaa soo saaraya oo lagu soo bandhigayaa garaaf faahfaahsan halkaa bogagga iyo geesaha waxay u taagan yihiin xiriiro.
Isticmaalka shabakada internetka
Miisaanka isticmaalka shabakadda wuxuu diiradda saarayaa fahamka dabeecadda dhamaadka dadka isticmaala inta lagu jiro booqashada goobta xoqitaanka.
Maxay yihiin kuwa gurguurtan?
Sidoo kale loo yaqaano caarada, shabakadaha webku waa barnaamijyo automated kuwaas oo soo saara xogta bogagga shabakada adoo raacaya googo gaar ah. Shabakada websaydhka, mashiinka webka waxaa lagu qeexayaa hawlaha ay fuliyaan. Tusaale ahaan, kumbuyuutarrada la doorto 'waxay diiradda saartaa mawduuc gaar ah oo ka socda ereyga. Marka la eego, gujiyeyaasha webka ayaa door muhiim ah ka ciyaara iyagoo gacan ka geysanaya sidii loo raadin lahaa makiinadaha raadinta raadinta bogagga shabakadda..
Xaaladaha badankood, mashiinnada webka 'waxay diiradda saaraan ururinta macluumaadka bogagga shabakadda. Si kastaba ha noqotee, guluubka shabakada ee soo saara xogta laga soo bilaabo goobta xayiraadda inta lagu jiro taranka waxaa lagu magacaabaa waraaqaha shabakadda. Inaad noqoto qaylo badan oo jajaban, RCrawler wuxuu xareeyaa waxyaabaha sida metadata iyo cinwaanada bogagga shabakadda.
Waa maxay sababta RCrawler u xiran yihiin?
Shabakada websaydhka, helitaanka iyo ururinta aqoonta waxtarka leh waa wax walba oo muhiim ah. RCrawler waa software kaas oo ka caawiya webmasters in macdanta webka iyo falanqaynta xogta. Qalabka RCrawler wuxuu ka kooban yahay baakadaha R sida:
URL-yada gaarka ah. Si aad u ururiso xogta adigoo adeegsanaya baakooyinkan, waa inaad si toos ah u siisaa URL-yada si gaar ah. Xaaladaha intooda badan, dadka isticmaala dhammaadka waxay ku xiran yihiin qalabka dibadda ee dibedda si ay u falanqeeyaan xogta. Sababtan awgeed, xirmada R waxaa lagu talinayaa in lagu isticmaalo jawiga R. Si kastaba ha noqotee, haddii ololehaaga qaraarka ahi ku yaallo URL gaar ah, ka feker inaad bixiso RCrawler tallaal.
xirmooyinka xayeysiinta iyo xayeysiinta (scrapR) waxay u baahan yihiin bixinta URL-yada URL-yada ah ee hore u sii wadi. Nasiib wanaag, xirmo tm.plugin.webmining si deg deg ah u heli kartaa liiska URLs ee JSON iyo qaababka XML. RCrawler waxaa si weyn loo isticmaalaa cilmi-baarayaasha si ay u ogaadaan aqoonta cilmiga sayniska. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka waxaa lagula talinayaa in cilmi-baarayaasha ka shaqeeya deegaanka R.
Hadafyada iyo shuruudaha qaar ayaa riixaya guusha RCrawler. Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah sida RCrawler u shaqeeyo waxaa ka mid ah:
Fududayn - RCrawler waxay ka kooban tahay dejinta fursadaha sida qoto dheer iyo qaylo-dhaan.
Isbarbardhigga - RCrawler waa xirmo u dhigma isbarbardhig si loo kasbado waxqabadka.
Waxqabadka - xirmadu waxay ka shaqeysaa helitaanka xogta la isku duuduubay waxayna ka fogaatay dabinnada taranka.
R-hooyo - RCrawler ayaa si wax ku ool ah u taageertay burburinta webka iyo isku-socodka degaanka R.
Culeyska - RCrawler waa xirmo ku saleysan R-jawaabo oo addeeca amarrada marka aad bogaga internetka kala soocaysid.
RCrawler waa shaki la'aan mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee soo kabashada oo bixiya farsamooyinka aasaasiga ah sida kala-jajabinta, isku-faquuqidda HTML, iyo falanqaynta isku-xidhka. RCrawler waxay si sahlan u ogaan karaan naqshadeynta, tartan ku wajahan xoqidda goobta iyo goobaha firfircoon. Haddii aad ka shaqeyneysid dhismaha maamulka xogta, RCrawler waxay qiimeyneysaa tixgelinta Source .